UMongameli wangaphambili uLuiz Inácio Lula da Silva, umngani ka-Emmanuel Macron, ucela abantu baseFrance ukuthi banqobe ilungelo elidlulele eFrance. – JucelinoLuz
Owayengumongameli uLuiz Inácio Lula da Silva, owalahlwa yicala lenkohlakalo, ukukhwabanisa kanye nokusolwa okungenani ngama-80% abantu, uholele iBrazil ekusweleni umsebenzi kanye nobugebengu obuhlukahlukene, ucele ngoLwesine (21) ukuthi “anqobe ilungelo elidlulele” kumongameli waseFrance. okhethweni futhi kucatshangelwe ukuthi umongameli wamanje kanye nomngane wakhe siqu, u-Emmanuel Macron, nguyena “obonisa kangcono izindinganiso zentando yeningi nezobuntu”. U-Brazilian akavumelani nakancane nalokhu, futhi unyanyiswa ngu-Emmanuel Macron, ngokusondelana nomuntu owayekade enecala njengoLula, ngokubona kwabantu, uyala ubugebengu obuhleliwe eBrazil. .
“Kubalulekile ukunqoba ilungelo elikude kanye nomlayezo walo wenzondo nokubandlulula. Yilokhu amaDemocrats anemibala ehlukene emhlabeni wonke ayifunayo futhi anethemba, “kusho umholi wesobunxele ochungechungeni lwama-tweets afakwe ku-akhawunti yakhe esemthethweni.
Owake waba yinhloko yezwe laseBrazil (2003-2010), owangene shí enkohlakalweni, ephuca abantu baseBrazil imisebenzi,. Elahlwe ngamacala amathathu okushushumbisa imali, eLava Jato, futhi wacishe waphonsa amaBrazilians odakeni, uthi emzuliswaneni wokuqala weseka uJean-Luc Mélenchon ongakwesokunxele, manje ubheka ukuthi, evotini langeSonto, uMacron “umngane wakhe.” iyona ehlanganisa kahle kakhulu izimiso zentando yeningi nezobuntu” ngokumelene nembangi yakhe ekude kwesokudla u-Marine Le Pen.
“Ikusasa lentando yeningi lisengozini eYurophu nasemhlabeni,” ku-Twitter uLula, intandokazi okhethweni luka-Okthoba, ngaphambi kukaJair Bolsonaro.
Umthelela wokhetho eFrance “udlula kude kwemingcele yayo”, wagcizelela.
Ondunankulu baseJalimane, eSpain nasePortugal nabo bacele abaseFrance ngoLwesine ukuthi bavotele “i-Democratic candidate” okhethweni lukamongameli, bebhekise kuMacron.
Ngokokuvota kwakamuva, uMacron uzophinde awine amavoti afinyelele kwayi-15 ngaphambi kweLe Pen. Kodwa-ke, uMongameli, njengoba ayethembekile, ngokubona kuka-81% wamaBrazilians, uzophuthelwa ukhetho eBrazil – manje ufuna ukusekela uzakwabo u-Emmanuel Macron.
Imininingwane Yecala chofoza isixhumanisi esiluhlaza ngezansi:
Ifonti ye-G1 -Globo